Sidee baan ku dhow lumay 200 Seeraar ganacsiga bishan la soo dhaafay - Blockchain News
Sidee baan ku dhow lumay 200 Seeraar ganacsiga bishan la soo dhaafay
An waano story by Reddit, kuwaas oo u rajeeyay in ay sii qarsoodi ah.
Sidaas, Sheekada dheer gaaban, Waxaan bilaabay Ganacsi sanad ka hor, boholyoobayay margin orod oo dhan ka 1k in 19k ( mararka qaar ku dhow hogaanka, mararka qaar ku dhow goor hore ama goor dambe, laakiin mar walba samaynta faa'iido)
dib baan u jeestay 3 BTC kuwa hooseeya oo aan ka turub ciyaaro lahaa (waqtiga 3k) galay ku dhawaad 200 BTC oo ku dhowaad ahaa 4 milyan oo ugu sarreeya iyo noqon lahaa 2 million at qiimaha hadda.
Waxaan u maleeyay in aan ahaa hanad ganacsi oo, ilaah a, wax alla wixii. Anyway, tani waa meesha murugo bilaabo.
Ka dib markii qashin qubka ka 19k in 11k aan dheer tegey hoose, oo la dhigaa isagoo intaa ku daray in booskeyga Isku Xigta in 12k 13k, 14k. Markaasuu, at 16k cat dhintay, booskeyga ahaa dheeraad ah a 100 BTC in faa'iido. Halkii ay ka ka dibna ku dhow iyo guud ahaan 300 BTC, Waxaan kor u marsiin ah oo kordhay size meel aan. Taas oo dhan waxaa liquadated on dhibicda back to 12k, maxaa yeelay, entry ayaa kacay si ka badan. waxaan badiyay 100 BTC faa'iido warqad iyo ku dhawaad 50 BTC margin. Waxaan la devasted, iyo hoos si ay u 150 total BTC.
Ka dib markaad qiimayso xaaladda, Waxaan garawsannay in bamka in 16k ahaa bisad dhintay yimid iyo in aanu hoos u socday. Sidaas daraaddeed waxaan shorted. at 12k. Added at 13k. Added at 14 iyo 15k. Helay liquidated ugu sareysa ee 17k. kale 50 BTC khasaaro. Down in 100.
Ka fikir, ok waxaan sameeyey sare sare ee 17k, uptrend dib. tegey dheer. Helay liquidated at 13k.
50 BTC tagay. halakeeyey, hubin, fikrad ma Dhadkan socday. Fadhiistay iyada oo dhibic si 9k, marka aan kabsatay Waxaan u maleeyay in waxa laga yaabaa hoose ee. xiisooday at 11500, argagaxa xiray 10500. Marka aan u tageen inay 13k lay naftayda haraati for xiritaanka argagax, tegey dheer at 12800.
Liquidated saaka for my Seeraar soo dhaafay.
3 BTC in 200, si ay u 0
Wakhtigan oo kale ayaan weli ahay in si lama filaan ah, Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay hishiis la dayacay xidhiidhka iyo dugsiga, oo hishiis la daydreaming ku saabsan oo ku nool nolol sare hodan sida fuck la malaayiin.
Hadda, Waxaan ahay meel.
Dhajinta si dadka kale siinin khamaara iska lacagta nolosha beddelo. Ma doonayaan in deeqaha ama talooyin aan dhajinta cinwaan siinin i PM. Waxaan marnaba ma waayi uu eraygii BTC mar kale sababtoo ah waxaan doonayaa in aan illoobin maqal
gypsytoy Idhi inaanan u ekaan aadan in la soo laabtay. Waxaan asal ahaan leeyihiin sheeko la mid ah sida OP waxaan ka maalgashiga wax walba oo aan lahaa tegey marka laga reebo in (sida arday jaamacadeed) si ay u iibsadaan 60 BTC in 2013 oo haysta xooggan ee adag a 4 sano. Markaas isagoo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ah 2016 iyo siinta 20 BTC iska shisheeyaha online kaasoo ka faa'ideystay iga, marnaba in ay mar kale lagu arkay. Markaas ee December, maalmood ka hor hogaanka, Waxaan bartay waxa ganacsiga margin dhab ahaa. Mad xoogaa yar. Badiyay qadar wanaagsan halka gama'did inta lagu guda jiro dhibic ka dibna dabagalka wax oo dhan (40 BTC) hoos ugu dhaadhacay 0.02 BTC.
Waxaan ka baxsan halakeeyey. Kalsooni ayaan ku qabaa in aan u socday si loo soo afjaro noloshayda this badan oo aan hore u bilaabeen miyaan gooni dunida iyo helitaanka arrimaha aan si. Waxaan dareemayaa cajiib shaaca iyo qirtay this on reddit, laakiin this post dhufatay guriga, sida mid ka mid ah sub ugu weyn oo ku saabsan nin ee walaalaha ah naftiisa dilay xaaladda la mid ah.
Waxaan jecel kuwa cimiladu karaa dib u dhac noocan laakiinse anigu uma aan ahay mid ka mid ah. Waxaan ka daqiiqadii ogaa aan akhriyey warqad cad in Seeraar ahayd fikrad kulan la beddelo. Waxaan kayd aan ku shubtay u galay, kalsooni ku qaba in aan xidhmooyin ahaan lahayd million a (20K) gudahood 5 sano (Taas waxaan u yeedhay ku dhowaad dhammaataan). Waxaa xitaa ma jeclaan Waxaan doonayaa in ay ku noolaadaan hab nololeed ku xadgudbay xumaanta, kaliya waxaan doonayay in ay dareemaan dhaqaale ammaan ah hal mar ee aan nolosheyda oo doonayay in ay la jirka kuwa dhow ii wadaag xoolaha iyo caawin dhiso ganacsi wanaagsan oo adduunka ka fiican. The memes bamka iyo qubayaasha iyo Lamborghini waa sidaas isnacsiiyeen, sida haddii ay dunidu u baahan yahay wax consumerism hedonistic ka badan laheyn. Waxaan ku soo koray quruxsan saboolka ah iyo kuwa ka foster home kabsatay in guriga la kobciyo oo dugsi ilaa dugsi. Waxaan si dirqi ah wada sameeyey college oo aan lahayn xirfadaha suuqa. Waxaan dhowr bilood ka dib laga badiyay shaqadeyda iibka dhamaadka dhintay oo aan naftayda keeni kartaa in ay dib ugu noqdaan oo kali ah helitaanka buy. Waxaan xoog qabtay oo dhan sano ah, inkasta oo aan laga yaabaa in aan dhab ahaan loo isticmaalo lacagta waqtiyada. Waxaan mar walba keenay qadada aniga ii gaar ah in ay ka shaqeeyaan iyo had iyo jeer qaaday dhulka hoostiisa ah markii aan halkii waayeen bixinta Uber. Waxaan maal-dhowr kun oo doolar ka dib 2013 oo aan marnaba arkay dinaar waxaa ka mid ah. OP wax badan oo sharaf leh oo aan aniga ahayn, sababtoo ah waxaan dhab ahaan ma leeyihiin ixtiraam is inuu iska diido deeqaha, laakiin sidoo kale waxaan ahay quruxsan qaarkood in dadka aan ugu deeqday ciidanka yar oo dadka ku jira xaalad la mid ah oo aan si cad haka 't suubiyaan mudan. Markii aan la kulanaa saaxiibo, waxay mar walba weydiin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee aan waa in la sameynayo, maxaa yeelay, iyagu waxay ogaan Waxaan horurimarineed Seeraar a muddo dheer. Dhoola oo eegay oo ku isha halka wanaagsan hadleynaa Seeraar waa cajiib Qorniinkaas oo aan si degdeg ah doonayaan in ay ku tuuraan ilaa qashinka dhow ka dib kartaan.
Waan ogahay meel kale ee caalamka, waxaa jira a 'i’ kuwaas oo go'aansaday ganacsiga margin ama joojiyay ka dib markii a khasaaraha yar ama ma bilaabaan ciyaaro dibi bilowga ah ee suuqa orso. ha i kastoo, Waxaan ahay nacas oo waxaan bixiyey waxa kaliya ayay iigu socdeen nolosha. Waxaan rajaynayaa in kuwa kale digniinaha ka, laakiinse anigu waa garanayaa ugu maayo. Si kastaba ha ahaatee, Ma leedahay nooca maanka in aynu wax sidan oo kale u tagaan oo aan ma taagnaan karo si ay u daawadaan moon Seeraar mar kale iyo in la tagay. Waa wax laga xumaado in lacag yeelan karaan amar caynkan oo dadka u taliya. Waan ogahay dad badan ayaa naftooda u xuub bedelay wanaagsan, laakiin waxaan u malaynayaa waxaa jira labada dhinac si qadaadiic ah.
Waxaan xitaa ma oga sababta aan weli u kolkol badan Seeraar iyo sub this. Waxaan macno ahaan aan ka fikiri karaa in wax kasta oo kale inta badan. Waxaan u maleynayaa in aan sii rajeynaya in ay hoos ugu dhici doonaa qaar ka mid ah lacagta aad u yar yahay oo aan u yeelan doontaa in dib u soo iibsadaan laakiin taasi dareen ka dhigin, maxaa yeelay ma ahan in aan $10 magacayga in ay dib u riday si ay u. Waxaan ku socdaa inay waayaan faa'idooyinka aan shaqo la'aanta iyo guryaha dhawr bilood oo runtii meel ay ku soo noqdaan mar dhaca.
Waxaan ogahay dad badan isu soo jiid lahaa by bootstraps iyo fuliyaan on laakiin waxaan ogahay in aan marnaba qarsoomi kari waayay maankayga. Waan ka xumahay in ay si xun u hadalkiisii ​​on your comment nooc oo sababaysan. Waxaan jeclaan lahaa OP fiican iyo waxa ay u muuqataa in ay leeyihiin dabeecad aad u fiican ku wajahan dhibka ay ku badan tahay wax aan sameeyo, xataa la miyo isagoo in badan.
edit: Waxaan inta badan ka xumahay this dhajinta. Waxaan sort of is tusay waxa aad aasay lahaa, ma uu ogayn in thread this weli quruxsan firfircoon oo aan posted on comment sare. Thanks for comments ee, PMs iyo Hadal Wanaagsan. Aniga ma ahi khatar degdeg ah wax oo aan isku dayay inuu ku soo bilowdo xisbiga nixi a nafteyda. Si kastaba ha ahaatee, aad oo dhan ku mahadsan tahay walaacaaga.
JungleSumTimes Waxaan halkaas. Badiyay my boqortooyadii ee guud ahaanteed 10 sanado kahor. Ay ku soo noqotey. Waxaad noqon doonaa qadhaadh, oo xanaaqsan tahay chelu naarke. Isku day inaad isbedel of muuqaal. Isbeddel of loolka.
Just bartaan inay shukriya waxa aad HA leeyihiin. Weli aad hortooda? gacmahaaga weli shaqeeyaan? wanaagsan ee kaftanka sheegaya Waxaad tahay? aasaaska The. Ku mahadsan tahay in aad xiddigaha weligood-jecel kor waxyaalahan.
Sababtoo ah lacag ama aan lahayn wax lacag ah ma run ahaantii beddelo WHO aad tahay. Shaqo on nin in. isaga sii daynin, qaar ka mid ah. Waxaad noqon doontaa dib. waqti iyo wax badan oo aad naftaada wuu dhaafaa Just qaadataa.
Rabbit0123 Waxa ay noqon ok.
Waxaa jira sheeko ku saabsan nin Chinese lahaa faras aad u qurux badan iyo qof walba ahayd masayr wax iyada ku saabsan, oo wuxuu ku yidhi sida "dude aad sidaas hodan yihiin". Waxa uu dhoola oo u jawaabno "land waan arki doonaa". Halkaa marka ay marayso qaar ka mid ah ayay ku soo orday duurka dhexdiisa, si qof ayaa ku yidhi "oh aad ahaayeen xaq u, ayay tagtay oo aad samayn nin !". Waxa uu ku jawaabay "Waan arki doonaa". Bishii yar faraskii dib u raacay qaar ka mid ah fardihii kale – wiilasha ayay helay duurka. Dadka ayaa la yaabay "wow, haatan waxaad tahay qofka ugu qanisan tuulada, waa in ay ku faraxsan!". Waxa uu u jawaabno "waan arki doonaa" mar kale. Markaasuu wiilkiisii ​​markii uu isku dayay in la raaco fardaha duurjoogta ah u dhacay iyo in uu lugta ka jabay… taas oo ahayd xaalad aad u xun ee Shiinaha ee Dr Makumbe . "Oh this maalkoodii oo dhan soo baxay oo ay inkaar". "Waan arki doonnaa!". In labo ka mid ah Baalallay gooyo Chinese bilaabay dagaalka iyo wada wiilasha caafimaad tuulada, mid ka mid ah kuwaas oo lugta ka jabay dabcan lahaa marka laga reebo. Dadka ayaa halakeeyey. "Waxaan jeclaan lahaa sida saxda ah in aad ahaayeen nin jir , hadda aan waxba haysan, Wiilashii nabigeena tageen si ay ula dagaalamaan dagaal doqon, oo aad fardahaaga iyo ilmahaaga lagu hayaa !". Garo waxa isna wuxuu ugu jawaabay!
Waa xaalad aad u aad u murugo badan oo aan dhamaanteen halkan si aad u wadaagno xanuunka iyo dhibaatada. Waxa muhiim ah in kastoo xusuusan yahay in aad laga badiyay kaliya dhowr BTC ah, iyo nolosha waa taxne kore iyo hoose oo kaliya ma aha oo kaliya, waa labadaas oo isku jira. Runtii waa in aad awood aan si aad u hesho oo aad u faraxsan oo ku saabsan baaritaan iyo aad u halakeeyey on taxne, ka dib markii mid ka mid ah waxaa jira kuwa soo socda oo kale , furnaadaan.
Waxa ay noqon dude okay, waa okay haddeer. Waxaad arki doonaa.
gypsytoy Thanks, nin. Taasi dhab ahaantii waa masaal ah oo quruxsan kalifaya oo kama aan u maqlay hor. Waa run in wax marwalba waa ay isbeddelaan for better or worse iyo waxaa jira waxyaabo badan oo hubaal ah in ay ku noolaadaan, waayo,, i kaliya ogahay in ay adag ama aan macquul noqon doontaa ii ha go of mashaqadan oo dhan. My maanka horay ii tortures iyo haatan waxa ay leedahay farabadan shidaal ka badan inay sidaa sameeyaan.
Thanks mar kale, Waxaan soo qaadan doonaa kuwaas comments wadnaha.
doc_samson Haddii aad jeclaan sheeko aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah akhrinta buugaagta on Zen. Waxaa ka mid ahaa in si gaar ah, aadan xusuusan karin meeshaas magaceediina waxaa loo, laakiin waxa ay ahayd mid aad u yar yar oo aad u qaro weyn oo kaliya hal masaalkan bogga ama laba kasta. Gaar ahaan qaar ka mid ah buugaagta Zen on ruux dagaalyahan. Waxyaabo badan oo jeclaan aqbalaan dhimashada si aad si dhab ah maalin kasta si ay si buuxda ugu noolaan karaan, iwm.
Sidoo kale Tao te Ching kitaabkii falsafada Chinese. Oo waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah Budhiism.
Iyo Marcus Arelius’ Meditations, badan oo Stoicism oo aad uula mid tahay Zen.
Dhimashada dhoola noo dhan, laakiin dhan nin samayn kartaa waa dib u ilka.
Waxaad kaloo leeyihiin amar ay maskaxdaada – ma dhacdooyinka ka baxsan. this garasho, oo waxaad ka heli doontaa xoog.
farxad aad nolosha ku xiran tahay tayada fikirkaaga.
Haddii aad dhib wax dibadda, xanuunka ma aha sabab u ah wax laftiisa, laakiinse aad qiyaasta waxaa ka mid ah; iyo tan aad leedahay awood ay ku noqon la joogo wax kasta oo.
Fontas nasiib Your ugu horeysay, dhigay oo laga badiyay. Waxaan halkaas sidoo kale.
Waxaa jira oo keliya laba fursadaha. this nasiib ku jiray oo dhan, ama waxa xirfad ahaa?
Haddii ay ahayd nasiib, markaas waa inaad habeen ah la aamini karin at casino, laakiin marnaba sarifan baxay. In dhamaadka guriga ku guuleystay, sida ay had iyo jeer ku samayn. Dhig gadaashiina ah waxaad udhawdihiin, dhigi meme ah oo ku saabsan, waana sheeko u sheegto ee baararka. pill buluuga ah.
Haddii ay ahayd xirfad, aad qaadashada kiniinka cas. Ururiya 3k kale, iyo waxa ay mar kale sameeyo. Just celi wixii aad ku samaysay sanadkii la soo dhaafay – dhab ahaan, waxa uu noqon doonaa fudud oo dhaqso mar labaad ku xeeran. Waxaad tahay sanad ka dambeeya, in nuugayo, laakiin waxaad la kulmi doonaa ilaa yelsinkii oo dhan hore iyo dib more. Taasi waa, haddii istaraatijiyad waa run ahaantii codka.
Dad badan oo ka dhigi iyo lumin marna ay nasiib ugu horeysay isku day mar kale, oo aan marnaba u ogaato haddii ay ahayd nasiib ama xirfad.
Waan ku soo dhamaaday boodayaa in godka bakaylaha ka dib markii aan nasiib ganacsiga ugu horeysay. go'aanka ugu fiican ee noloshayda. My labaad xitaa dhakhso u yimid kuwii hore ka badan, oo ahaa aad u balaaran – ka idiina asalka u muuqdaan miniscule hadda.
Waa in aad adigu si, haddii aad rabto in aad ogaato sida qoto dheer aad godka bakayle tagaa.
zksnugsWaxaan fahamsanahay xanuunkaaga. runtii waxaan ku samayn.
Mararka qaarkood waxaan jeclaan lahaa in aan marnaba yimid in ay ogaadaan of crypto. Waa labada barako iyo inkaar. barakada A sababta oo ah waxaad ka heli kartaa 'gainzz waalan', laakiin waqti isku mid ah, aad u xanniban Adduun ay kooxo badan, halkaas oo aad maskaxdaada u wareegaa in fikirrada sida sida aad hawlgab laga yaabaa millionaire ah haddii aad weli ma ay hore iibiyey / sameeyey ganacsiga in khalad / iibsanayay hore iwm. Uma maleynayo aan marnaba this ka baxsan karin. Ilaa iyo inta aan ku noolahay waxaan weligiisba joogi doonaa addoon in afkaartaan, taas oo had iyo jeer iman doonaa inaad nala soo noqnoqon oo ah waxa aan laga yaabaa 'sameeyey si ka duwan'. Waxaan u badan tahay in marnaba socon karo iyo illoobin ku saabsan, sida waxa aannu ku samayn kartaa xaalad ceeb. Maxaa yeelay, halka dadka kale la halmaami karin, aan waligey illoobi doonin falalka noo gaar ah.
FontasHabka ugu Zen wax ka qabashada qaadashada iyo badiyay maal a – waxaa jira oo kaliya 2 fursadaha. Waxay ahayd nasiib ama ay ahayd xirfad.
Haddii ay ahayd nasiib, markaas habeen la rumaysan karin waxaan lahaa at casino, laakiin marnaba sarifan baxay. In dhamaadka guriga ku guuleystay, sida ay had iyo jeer ku samayn. waxa oo dhan ku rid meel iga dambaysa, dhigi meme ah oo ku saabsan, oo waxa kaliya noqon doonaa sheeko funny u sheegto ee baararka. pill buluuga ah.
Haddii ay ahayd xirfad, Waxaan qaadashada kiniinka cas. Ururiya saldhig yar, iyo waxa ay mar kale sameeyo. Ku celi wixii aan sameeyey markii ugu horeysay ku dhawaad – dhab ahaan, waxa uu noqon doonaa fudud oo dhaqso mar labaad ku xeeran. Taasi waa, haddii istaraatijiyad waa run ahaantii codka.
Dad badan oo ka dhigi iyo lumiyaan maal horeysay marnaba u ogaato haddii ay ahayd nasiib ama xirfad.
Waan ku soo dhamaaday boodayaa in godka bakaylaha ka dib markii aan nasiib ganacsiga dotcom ugu horeysay. go'aanka ugu fiican ee noloshayda. My labaad xitaa dhakhso u yimid kuwii hore ka badan, oo ahaa aad u balaaran – ka idiina asalka u muuqdaan miniscule hadda.
Qoomamada aan waa lumin 2 sano masaakiinta dheer guriga Hooyo ka hor inta aanay dhammaan riixi ee madaxayga – nasiib ama xirfad, Waxaan marnaba u ogaadaan – haddii mar aan isku dayo oo aan arko. Soo baxday waxay ahayd xirfad.
gypsytoy Haa waa adag xaqiiqo ah. Waxaan u maleynayaa jawaabta kaliya waa in la helo ka qiima badan ee dhinacyada kale ee nolosha. Relationships, hiwaayadaha, siinta dib. Waxaa jira wax badan oo ka mid ah siyaabaha in ay isku dayaan in ay Wanaajiya maskaxdaada ka dib markii wax sidan oo kale, Waxaan kaliya ka walwalsan aanan haysan qalabka ama doonista in sidaas la sameeyo ahay. Thanks for comment.
AjaxFC1900 Waxaan u maleeyay in aan ahaa hanad ganacsi oo, ilaah a, wax alla wixii
Ha illoobin oo ku saabsan hodantinimada, doonyaha, hotels iwm…dhamaadka maalintii waa dhan oo ku saabsan dareen in, qof u qalmo inuu ku dareemayaa in ugu yaraan hal mar in nolosha…aad soo martay in dareen aad u da 'yar…dhibin aad u badan, dhamaadka maalintii aynu ku jirno oo dhan asal ahaan hore u dhintay, in nidaamka weyn ee wax ma macno ah in wax badan haddii aad ka dhigay ama laga badiyay 5 malaayiin , kuu sheegi dheeraad ah in nidaamka weyn ee wax jiritaankeenna macno ah ma in wax badan oo, sida aan sheegay in aanu dhan tahay hadda dhintay si kasta.
Waxaa adag, mararka qaar, ee la soo dhaafay, waxa uu noqon sahlan loo isticmaalo… sida dagaal iyo sidoo kale dunida oo ama heli rasaas madaxa ama dhinta dagaalka…hadda annagu ma samayn waxyaalihii dambe oo run ahaantii waxaan u leeyihiin in la failure taasoo ah hab ka xun dhimashada for our maskaxda / maskaxda ka badan ka qaban. Waxa ay ahayd hab fudud dib ka dibna, markii aynu yar caaqil iyo dheeraad ah dagaal
Cinnamon_Twist runtii waxaan haba naceen macquulka this. Dadka la soo dhaafay ay ahaayeen cajiib ah caaqil kaliya waayo, ma ay fadhiistaan ​​aqoonta accumlated waxaan leenahay maanta iyaga ma ka dhigi wuxuushta. Weli waxaad tegi karin in ay dagaal haddii aad doonayay qofna waa inaad joojinta.
falsafada nolosha in sidoo kale waa run ahaantii murugo. Waxa aan is cad in maxaa yeelay nolosha ugu danbeyn soo gabagabeyn doonta kuu wanaagsan in waa in aad u arkaan in ay si aan macna lahayn oo yar yar.
JungleSumTimes Waxaan qabaa in uu jiro nooc ka mid ah xorriyadda ka garashada in aan dhamaanteen u eegeysa yar shaashadda weyn gaaray. Markii aad aqbasho insignificance ah ee jiritaanka run ahaantii waxaa aad u siidaysay ilaa kaliya naftaada iyo sida qofka in uu noqon iyo raacno waxyaalaha aad u jecel halkii ay waqtiga oo dhan walaac ku saabsan sida bulshada aad u xukumaya.
Guys heli xun sidan, maxaa yeelay, aad Roman waa qayb weyn oo ka mid ah sida aad arki oo ka go'an inuu guul ku ah nolosha. Waxaa jira tallaabooyin badan oo fiican.
pepe_le_shoe Turubku ayaa element ah xirfad, laakiin haddii addict khamaar antes kor, uu khamaaro doonaa. Waxa uu u ciyaari laga yaabaa dhagan waayo, 2, 4, waxaa laga yaabaa in 6+ saacadood, maalmood xitaa, laakiinse meelaha qaar, ka hor inta uu aado guriga, uu khamaaro doonaa. Isagu ma uu yeelan doono darajo sare in daqiiqad in anshaxa, kii uu doonayo, hal mar oo kaliya, hor u qalmay iyo sharad oo dhan ee ku saabsan an aadka si toos ah gudaha, ama la set hoose ku hardiyi aad u adag marka uu ogyahay hoos uu helay baxay barbaro.
Waxaa jira ciyaartoy turub kuwaas oo mar walba ay ku guuleysato, xirfad malaha waxa ay heshay, xisaabta ee, ama akhriska dadka. Laakiin mid ka mid ahaa dadka kuwanu waa khamaara run. Gamblers mar walba gurigaaga tag waxba.
Taas ayaa igu jiray in muddo ah. Ma ciyaari lacag dambe.
SamAiken Anigu ma aan leeyihiin 200 BTC, laakiin anigu waxaan tagay xaaladaha Janjeeri la mid ah ugu yaraan laba jeer. Adiguna ma waxaad tahay mid ka mid ah marka hore si aad u hesho hodan dhakhso oo lumiso lacag dhan. Nasiib wanaag, ma aad aakhirka oo xarig ah sida badan “taajir soomi” dadka samayn.
Sida laga soo xigtay waxa aad sheegtay, aad qabto nusqaamaha aqoon weyn oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay ee kala duwan iyo khatarta maareynta, sidaas darteed fadlan waqti qaar ka mid ah ku qaataan waxa ay cilmi. Hadda waxaad nacdaa la BTC iyo aad u wanaagsan, waxaan ogahay dareen this, laakiin waxa ay u gudbin doonaa.
Waxaa jirta fursad ah in aannu yeelan doono suuqa a bearish isbuucyo yar ama xitaa bilo, si aad u leeyihiin waqti in ay is dajiyaan, aad iskaaga u baratid maal iyo annaga na soo biiro ka dib on ruxruxo xiga. waayo-aragnimo iyo aqoon ka badan ayaa aad leedahay, celceliska Maal crypto.
Oo haatan qayb ka mid muhiim ah – weli aad ka xoq dhisi kartaa faylalka! Waxay qaadan doontaa badan, ka badan dhowr bilood, laakiin waxaad u samayn kartaa. Baan ku sameeyey,. Dad badan ayaa sameeyey. Waad samayn kartaa, sidoo kale.
Iyo ganacsiga had iyo jeer waa khatar, walaac iyo ma qiimo kasta oo bulshada ama bulshada, sidaas maal iyo hodling waa hab aad uga badbaado inay taajir, halkii ganacsiga. The ka weyn oo aad ka heli, stress ka khatar badan noqon doonaa, waayo, waxaad, oo waxa uu xitaa dili karaa inaad (e.g. wadne istaag). Sidaas qaado waqti aad, bartaan oo ku saabsan khatarta maareynta, marna ciyaaro aad faylalka tacliimeed oo dhan, iyo marka aad mar kale ka heli cryptos badan, ha ilaawin inaad rebalance boortofooliyada by lacag qaar ka mid ah soo galay lacag Fiat, hantida maguurtada ah ama kaydka.
Marka laga reebo maal, fadlan ha iloobin in ay diiradda saaraan waxa aad rabto inuu ku sameeyo nolosha marka laga reebo isagoo nin hodan ah oo duulaya Diyaaradaha. Sidee aad rabto in aad si loo caawiyo dadka iyo ka qayb bulshada? Oo maal waqtiga aad jihada this. aad waayo-aragnimo, aqoon iyo sumcad ma ahan oo keliya u libdhi doonaa sida BTC sameeyey.
Caqli yeesha oo is dajiyaan!
top 8 Codsiga Best Mobile for Cryptoсurrency
Haddii aad sooco badan ...
Sidee mamnuucidda on advertising crypto on Facebook caawin doonaa warshadaha
Ban on xayaysiin crypto ...
50 Cent fayl kacday oo sheegay in uu marna leedahay bitcoins
Jimcihii, .. February.